विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता पक्राउ प्रकरणमा गृहमन्त्रीले मुख खोले « Janaboli
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता पक्राउ प्रकरणमा गृहमन्त्रीले मुख खोले
चितवन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेकपा विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड पक्राउ बारे मुख खोलेका छन् । उनले प्रकाण्ड ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएकाले पक्राउ गरिएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । कतिपयले जनयुद्धका बेला गृहमन्त्री बादलको सहकर्मी भएकाले पुराना केही प्रशोध भएका कारण फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।
शुक्रबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारुकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री वादलले प्रकाण्डको नाममा वारेन्ट जारी भएको स्पष्ट पारे । नेकपाका नेता समेत रहेका गृहमन्त्री बादलले भने, ‘प्रकाण्ड गैरकानुनी काम र ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न थिए । चन्दा आतंक मच्चाएकाले पक्राउ गरिएको हो ।’
प्रकाण्ड अपराधी हुन् भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘जसले कानुनलाई उल्लंघन गर्छ, त्यसलाई हामी अपराधी भन्छौं ।’ बादल गृहमन्त्री हुँदा प्रकाण्डको हातमा हथकडी लाग्यो भन्ने टिप्पणीहरु भइरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री बादलले भने, ‘बादल गृहमन्त्री हो, गृहमन्त्रीको काम कानुनको कार्यान्वयन गर्नु हो, अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने र सजाय दिने हो । अपराधीलाई नियन्त्रण लिने क्रममा यस्ता घटना हुन्छन् ।’
नेकपा विल्लव लगायतसँग राजनीतिक सम्वाद पनि गर्ने र प्रशासनिक रुपमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको उनले बताए । राजनीतिक रुपमा समाधान खोज्न सरकारले सम्वादमा आउन आहृवान गरेको गृहमन्त्री बादलले बताए ।
खानेपानीमन्त्री विरुद्ध दुस्प्रचार गर्ने सहसचिव पाण्डेको यस्तो दाउ फेल भएपछि…
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगर बिरामी भएर अस्पतालमा उपचाररत थिइन । उक्त
बिहानैं हिमपातका कारण यस्तो देखियो चन्द्रागिरी ! [तस्बिर हेर्नुहोस्]
काठमाडौं । अचानक मौसममा आएको बदलीका कारण चन्द्रागिरीमा परेको हिउँले स्थानीय क्षेत्र मनमोहक देखिएको छ
सचेत रहनुहोस् : काठमाडौसँगै देशभरी आज यस्तो रहनेछ मौसम [४ तस्विर]
काठमाडौँ । काठमाडौमा मंगलबार रातिदेखि नै हल्का बर्षा भइरहेको छ । बर्षा उपत्यका लगायत देशभरी
सप्तरीमा ड्युटीका प्रहरी हबल्दारलाई गोली हानेर फरार दीपेन्द्र प्रहरी इन्काउण्टरमा मारिए
सप्तरी । एक साताअघि सप्तरीमै प्रहरी हवल्दार महेन्द्र चतरी यादवमाथि गोली प्रहार गरेको घटनामा संलग्नता
प्रबीण तह, स्नातक र स्नातकोत्तरमा पास गर्न नसकेकालाई खुल्यो अन्तिम मौका परीक्षा
त्रिभुवन विश्वविद्यको यस्तो छ स्ववियु निर्वाचनको तयारी
स्नातक दोश्रो बर्षको नतिजा प्रकाशित
कक्षा ११ र १२ को परीक्षा तालिका सार्वजनिक [पहिलो दिन अंग्रेजी]
शिक्षक लाइसेन्स बिना पढाउन पाइने
भारतले नेपालको कत्ति सीमाना मिचेको छ ? [सबैंको जानकारीका लागि सेयर गरौं]
कुखुराको खुट्टा भाँचेको अभियोगमा ४ दिनदेखि बाँके प्रहरी हिरासत
देश धार्मिक युद्ध नजिक : गोरु काटेर जेल परेकालाई रिहाई पछि गोरु काटेरैं सम्मान !
विदेशबाट फर्कदा श्रीमतीले अर्कैको बच्चा गर्भमा बोकेको थाहा पाएपछि ! [हेर्नुहोस् दर्दनाक भिडियो]
यस्ता मनकारी मेयर, जसले गाडी किन्न छुट्याएको रकमले गाउँमैं अस्पताल बनाउँन लागे !
निजामती सेवामा नयाँ नियम, हट्यो खरिदार पद, अरु के–के भयो परिवर्तन ?
खाद्यमा वरिष्ठ अधिकृतदेखि सहायकसम्मको जागिर खुल्यो : SLC ले समेत आवेदन दिन पाउने
राजधानीको होटलमा विष्फोट १४ भन्दा धेरैंको मृत्यु ! [घाइतेहरुलाई रक्तदान गर्न रेडक्रसको अपिल]